Izibalo: Lawo makhukhi agcina imininingwane efana nenani lezivakashi eziya kuwebhusayithi, inani lezivakashi ezihlukile, makhasi we webhusayithi avakashelwe, Umthombo wokuvakasha njll. Le mininingwane isisiza ukuthi siqonde futhi sihlaziye ukuthi i-webhusayithi isebenza kanjani futhi lapho idinga ukuphuculwa.
Ukukhangisa: Iwebhusayithi yethu ibonisa izikhangiso. La makhukhi asetshenziselwa ukwenza izikhangiso zakhomuntu zivezelwe wena ukuze zibe nenjongo kuwe. Lawo makhukhi futhi asisiza ukulandela ukusebenza kahle kwale mikhankaso yezikhangiso.
Imininingwane egcinwe kula makhukhi ingasetshenziswa futhi ngabanikezeli bezikhangiso abavela eceleni ukukukhombisa izikhangiso kwamanye amawebhusayithi esipheqululini.
Ukusebenza: Lawa makhukhi asiza ukusebenza okuthile okungabalulekile kuwebhusayithi yethu. Lokhu kusebenza kufaka phakathi ukushumeka okuqukethwe okunjengamavidiyo noma ukwabelana ngokuqukethwe kuwebhusayithi ezisekelweni zezindaba zokuxhumana.
Izintandokazi: Lawo makhukhi asisiza ukugcina izilungiselelo zakho kanye nokuphequlula okuncamelayo njengokuncamelayo kwezilimi ukuze ube nesipiliyoni esingcono nesisebenzayo ekuvakasheni kwewebhusayithi esizayo.
Ngingazilawula kanjani izintandokazi zekhukhi ?
Uma ngabe uthatha isinqumo sokushintsha okuthandayo ngemuva kweseshini yakho yokuphequlula, ungachofoza ku- “Ubumfihlo & Umgomo Wamakhukhi” ithebhu esikrinini sakho. Lokhu kuzobonisa isaziso sokuvumela futhi ukukuvumela ukuthi uguqule okuthandayo noma uhoxise imvume yakho ngokuphelele.
Ngaphezu kwalokhu, iziphequluli ezahlukahlukene zinikeza izindlela ezahlukahlukene zokuvimba nokususa amakhukhi asetshenziswa amawebhusayithi. Ungashintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuvimba / ukucisha amakhukhi. Ukwazi kabanzi ngokuphatha nokususa amakhukhi, vakashela wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.